Izinsiza - ShangHai Harmonic Machinery Co., Ltd.
Icubungula Izinsiza kusebenza
V ertical CNC H igh-speed H obbing M achine
Ithuluzi lomshini 5 i-eksisi 4 ukuxhumana, ukwakheka okuqondile, ukuthuthukisa ukusebenza kahle nekhwalithi;
Isetshenziselwa amagiya emodi engu-6 nangaphansi.
Ovundlile CNC H igh-speed H obbing M achine
Ithuluzi lomshini line-compact design design, ukususwa okuzenzakalelayo kwe-chip, okuncane, isakhiwo somuntu esakhiwe, nokusebenza okulula
Ukunemba kwemishini kwethuluzi lomshini kungafinyelela ebangeni lesi-6 le-GB / T10095.1-2008, futhi ukuqina kwamazinyo kunguRa1.6μm
I-CNC G indlebe S haper
Ithuluzi lomshini li-axis ezintathu ezixhumanisa i-CNC gear shaper. Hlakulela uhlelo lokulawulwa kwamanani oluthuthukile ukubona ukujikeleza kwethuluzi lokuphotha (i-X axis), ukuzungezisa kwethebula lokujikeleza (i-Y eksisi), ukulawula okuqondile kwekholomu yomsakazo (i-Z axis) nokuxhumana.
Ikholomu yethuluzi lomshini lisekelwa ngojantshi wokuqondisa oqondile wokucacisa ukufeza okuphakelayo okusabalalayo okuhamba phambili nokunyakaza okusheshayo.
I-CNC S ine- M achine
Ukuzungezisa insimbi yokuphotha kuqhutshwa yimoto yokuguqula imvamisa; bona ukuguqulwa okungenanyathela kwejubane lokushefa;
I-worktable isekelwa ukuqina komugqa komhlahlandlela womzila futhi iqhutshwa ngezikulufo zebhola ukufeza ukuguqulwa okungenantambo kokuphakelayo kwe-axial;
Ngendlela yokuguqula isimo, ingabona ukushefa kwamazinyo amise okwedramu kanye namagiya amancane;
Gear R olling M achine
Ithebula elikhulu lokuslayida limile mpo ngokulingana, okulungele ukususwa kwe-chip nokupholisa okokusebenza, futhi kunciphisa kakhulu ukugqoka kwesitimela
Isakhiwo esime mpo sinciphisa kakhulu isikhala sesakhiwo, futhi sisebenzisa idrayivu ye-CNC, eyehlisa kakhulu indawo yethuluzi lomshini.
Izintathu-eksisi CNC, ukulawula okugcwele kwedijithali
Ingacubungula i-groove evunguza, i-disc milling cutter, i-hob spiral, i-hobting cutter, i-circular blade blade
Gear M easurement C faka
Ngokunemba High futhi isicelo elula, kungaba ngokushesha ukukala izingxenye ezahlukene igiya futhi rotationally izingxenye symmetrical.
Kuyinto elula, esheshayo futhi elula ukudala imisebenzi yokulinganisa eyinkimbinkimbi nenombolo enkulu yemibiko yokulinganisa
Ukuboniswa okuphelele nokukalwa okuphelele kuyo yonke inqubo kungasetshenziswa njengokujwayelekile.
I-RS232 ne-USB isikhombimsebenzisi esibonakalayo, ukukhishwa kwedatha okulula
I-universal O ptical M icroscope
Usebenzisa ukwahlukanisa ukwahlukanisa nobuchwepheshe bokwenza idijithali, inezici zokufunda okunembile nokuvumelana okuhle, okuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi.
Inokunemba kokulinganisa okuphezulu kakhulu, futhi ilungele ikakhulukazi isilinganiso esilinganiselwe sobude, i-engeli nentambo. Ifakwe isethi ephelele yezesekeli, futhi ububanzi bokusetshenziswa bukhuliswe ngokuphelele.
Ukufakwa kulula, xhuma futhi kudlale, futhi ukuphela kwekhompyutha kusebenzisa i-USB2.0 interface ukuxhuma nokukhipha kalula.
Ukusebenza kulula, isoftware yokusebenza inokuhambisana okuqinile, i-interface ilula, futhi isilinganiso sohlaka lokuchayeka, umehluko, ukukhanya, ubukhali nosayizi wesithombe kungalungiswa ngokukhululeka.
Yenza ngokuqinile ukucubungula idatha ngokuya nge-GB / T 26704, futhi ususe ngokuzenzakalela ukuhlehliswa kokubekezelelana.
Ikhanda lokuhlola nelensi yenjongo kushintshwa phakathi komunye nomunye ngesikhathi sokuhlolwa, futhi iphoyinti lokuhlola libekwa ngokuzenzakalela ngokunembile.
Ingavivinya imisebenzi yokusebenza eyisicaba kanye nemisebenzi egobile ene-curvature kusuka ku- Φ50mm kuye kokungapheli.
Ukuhlolwa kuyashesha, kulula futhi akulimazi.
Umshini wokulinganisa we-CNC ngokunemba okuphezulu (1.7um), isivinini esikhulu nokusheshisa okuphezulu.
Inomsebenzi wokuthola ophakeme kakhulu nokusebenza kokulawula okuphezulu, futhi ifinyelela ukukalwa okuphezulu ngokunemba ngezakhiwo ezahlukahlukene, izilawuli, ukucubungula izingxenye nezobuchwepheshe bomhlangano.
Isivinini sokubekwa kanye nokunemba kufinyelela ukusebenza kahle okuphezulu nokulinganisa okuphezulu kokulinganisa kwendawo.
Izinketho ezinamandla zengezwe kulayini womkhiqizo, kunciphisa kakhulu isikhathi sokukala sisonke kusuka ekusetheni kuye ekulinganisweni nasekuhloleni.